Hooyooyinka daanyeerada Bonobo waxay wiilashooda u raadiyaan xaaska mustaqbalka… – Hagaag.com
Posted on 22 Maajo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maaha hooyooyinka bini aadamka oo keli ah kuwa u raadiya wiilashooda xaas fiican. Hooyooyinka daanyeerada Bonobo sidoo kale waxay u raadiyaan wiilashooda xaaska mustaqbalka…
Hooyooyin badan ayaa dhex gala nolosha carruurtooda shakhsiga, laakiin in yar oo ka mid ah ayaa qaadata qaraar adag. Sidoo kale xaalada adduunka xaywaanka ayaa hooyada daanyeerka Bonobo ugu doorraa gabadha u bisil bacrimin caruurtooda qaan gaarka ah.
Daanyeerka Chimpanzee ayaa leh hooyo awood leh oo ka hortagta ragga in ay u dhowaadaan dhediga ay ku jiraan waqtiga uurka si faraca loo ilaaliyo, sida ku cad daraasadan cusub.
Dabeecadani ayaa waxay u muuqan kartaa wax aan shaqeynin, laakiin sida ay cilmi-baarayaashu sheegeen waa mid aad u waxtar badan, waxay badineysaa fursada wiilka ee saddexda jeer uu wax ku tijaabiyo si uu u lahaado farac khaas ah.
Labadan mujtamac ama Jaaliyad ee daanyeerada Bonobo iyo Chimpanzee waxay caruurtooda ku taageeraan khilaafaadka u dhaxeeya ragga, laakiin hooyooyinka Bonobo oo keliya ayaa ku taageera caruurtooda sidii ay u heli lahaayeen haweeneyda mustaqbalka.
Cilmi baadhayaasha ayaa sheegaya in isdhexgalkaasi oo kale ay ku yar tahay Jaaliyada Chimpanzee, sababtoo ah ragga ayaa hogaanka u haya haweenka, sidaa darteed hooyooyinka Daanyeerka Chimpanzee wey ka awood ama galaangal yar yihiin hooyooyinka Bonobo.